के गर्दै छन् लकडाउनमा महिला फुटबल खेलाडीहरू ?
विराटनगर, १५ जेठ । चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना संक्रमण विश्वभरि नै तीव्र गतीमा फैलिरहेको छ । नेपाल पनि कोरोना महामारीबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
देशलाई कोरोना संक्रमणबाट संक्रमित हुन नदिन सरकारले ११ चैत्रदेखि देशमा लकडाउन घोषणा गरेको छ र २० जेठसम्मका लागि यसलाई लम्बाइएको छ । यहीँ लकडाउनका कारण देशमा रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले गहिरो असर पारेको छ ।
लकडाउनले खेल क्षेत्रमा पनि निकै असर पारेको छ । लकडाउनमा के गर्दै छन् त महिला फुटबल खेलाडीहरू ?
पूजा राना मगर नेपाल आर्मी क्लबबाट नेपाल पुलिस क्लबमा आवद्ध भएकी मात्र तीन महिना भयो । घर पुचाम, कोहलपुर भएपनि हाल उनको बसाईं काठमाडौंको स्वयंम्भुमा रहेको छ ।
मगर मैदानमा डिफेन्डरको रूपमा खेल्छिन् । राष्ट्रिय महिला टोलीकी डिफेन्डर मगर नेपाल पुलिस क्लबकी खेलाडीसमेत हुन् ।
लकडाउनका कारण नेपालमा कुनै पनि फुटबल गतिविधिहरू हुन नसकेकाले मगर यति बेला आफ्नै कोठामा छिन् । मगर भन्छिन्, ‘अहिले ट्रेनिङ केही हुन पाएको छैन त्यसैले बिहान बेलुका कोठामा नै वर्कआउट गर्ने गरेको छु ।’
सेल्फ ट्रेनिङ मात्रै गरीरहेकी मगर मैदान धेरै मिस गर्ने गरेको बताउँछिन् । कोठामा नै सेल्फ ट्रनिङ गरिरहेका कारण ‘डाईट’ मा भने खासै ध्यान नदिएकी उनले बताइन् । मगर थप्छिन्, ‘ट्रेनिङ नभएकाले डाइटमा खासै ध्यान दिइरहेको छैन, लकडाउनपछि मैदानमा उत्रँदाचाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ होला ।’
हुन लागेको महिला फुटबल लिग कोरोना महामारीका कारण रोकिएपछि ठप्प भएको नेपाली फुटबल प्रतियोगिता कहिले सुरु हुन्छ मगरलाई थाहा छैन । परिवारदेखि टाढा रहेर खेलाडी जीवन बिताइरहेकी मगर घरको यादले भने सताउने गरेको बताउँछिन् ।
‘उता कोरोना संक्रमितहरूको संख्या धेरै नै भएको समाचारमा आइरहेको छ,’ यस्तो समाचार सुन्दा परिवारको चिन्ता झन् धेरै लाग्ने मगर भन्छिन्, ‘घरमा कहिलेकाहिँ मात्र कुरा हुन्छ, अहिलेसम्म त सबै जना सुरक्षित नै हुनुहुन्छ ।’
घरदेखि टाढा भएकाले यस्तो बेला सबैजना सुरक्षित रहेपनि डर लागिरहेको मगरले बताइन् ।
इटहरीकी स्थानीय बासिन्दा पौडेल नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी नियमित सदस्य हुन् । मैदानमा फरवार्डको रूपमा खेल्ने पौडेल हाल काठमाडौं स्वयंभूमा बसिरहेकी छिन् । लम्बिएको लकडाउनका कारण अहिलेसम्म कोठामा नै दिन बिताइरहेकी उनी बताउँछिन् ।
नेपाल पुलिस क्लबकी खेलाडीसमेत रहेकी पौडेल भन्छिन्, ‘अहिले त सेल्फ ट्रेनिङ गर्ने, खाने, बस्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत अपडेट भइरहने काम मात्र भइरहेको छ ।’ यसका अलवा भिडियो हेरेर फुटबल टेक्निक्स सिकिरहेको उनले बताइन् ।
घर परिवारको याद आइरहने भएपनि फोनमा नियमित कुरा भइरहेको पौडेल सुनाउँछिन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलसँगै नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमकी सदस्य लिम्बू मैदानमा मिडफिल्ड सम्हाल्छिन् । पथरी, मोरङकी लिम्बू यति बेलाकोठामा नै सेल्फ ट्रेनिङ गरिरहेकी छिन् । आफ्नो दैनिकी वर्कआउट, गेमको भिडियो र मोटिभेसनल भिडियोहरू हेरेर बित्ने गरेको लिम्बूले बताइन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलकी सदस्य रहेकी लिम्बू भन्छिन्, ‘यस्तो संकटको बेला मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो देश हो । त्यसैले परिआएको खण्डमा म फिल्डमा उत्रिएर प्रहरी बलको काम गर्न पनि तयार छु ।’
अफिसले खटाएको क्षेत्र र समयमा ड्युटी गरिरहेको पनि उनले बताइन् । लिम्बू थप्छिन्, ‘अफिसले उपलब्ध गराइदिएको पञ्चा, मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मसँगै अन्य खेलाडी साथीहरू पनि ड्युटीमा खटिरहनु भएको छ ।
दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा पदक विजेता खेलाडीहरूलाई ड्युटीमा केही छुट भएपनि आफूहरू नियमित रूपमा अफिस गएर फिल्डमा आउन सधैं तयारी अवस्थामा रहने गरेको मिडफिल्डर लिम्बू बताउँछिन् ।